thinzar's blog: Facebook Quiz တစ်ခု လုပ်ကြည့်ခြင်း
ဒါကတော့ ဒီquiz ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေခံ forwarded email လေးပါ။ Original content ရေးတဲ့သူကို လေးစားပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်။
YOU KNOW YOU ARE BURMESE IF...* You eat ngan-pyar-yae in front of your friends even though they keep hinting that it stinks.
* Once inawhile, you eat nga pi in front of 'em.
* You listen toalot of BBC, or at least your parents does no matter how much the commentary sucks or how bad the transmission it.
* You are used to listening to radio static like you actually understand it.
* You don't actually remember all of your national holidays.
* The only one that you definitely remember is Thingyan.
* And even that you dont remember which lunar month it is in. (I dont)
* You dont know your twelve lunar months either (or is it ten?).
* u keep on listening to burmese "music" even though 99.99% of "burmese songs" are plagarised..
* You think that the danpauk in Burma cooked by Indian immigrants is better thanthe Biryani they used to cook in India.
* You probably never wearapasoe or htemein except for two reasons:
1. You are going to school
2. You just got out or got intoashower.
* You bow your head when you pass between two people engaged in some way..
* You have tried many times to translate the word "arr narr" to english and failed terribly as many times...
* No one knows where exactly you are from n u have to keep explaining to everyone.
* You never listen to burmese traditional music and dont understand any heck of it at all....
* Ethnically, You have some chinese blood somehow.. (population pressure from China).
* You still don't know why international news networks still keep calling you Burma and Rangoon when u grew up knowing Myanmar and Yangon... (cuz they are illegitimate names erected by an illegitimate government by the way)
* You rant on the @#$@# mothef****** a**h*** dictators all the time but you are too chicken to go in there and do anything about it.
Eventually, you end up working for the BBC.
29/4/09 6:14 PM
i also answered that quiz. :)
29/4/09 8:32 PM
ကျနော်ဖြေတာ ၈၅% ရတယ် ။ ဒီ Quiz လုပ်တာ အမကိုး။ ချီးကျူးပါတယ်ဗျာ။ သူငယ်ချင်းတော်တော်များများလဲ ဝင်ဖြေကြတယ်။ ဒီလို ကိုယ့် application တွေနဲ့ facebook မှာ ဝင်ငွေရှာလို့ ရတယ်မလား၊ ကြားဖူးလို့ မေးကြည့်တာပါ။
29/4/09 9:31 PM
potato>> :) did u satisfied with the answer?
khet myint myint>> ဒီနာမည်ကို ကိုTZA ရဲ့ ဒီကိုလာမှာ အမြဲတွေ့တွေ့နေတယ်။ :D ဟုတ်ပါတယ်။ Facebook ပေါ် ဒီquiz ရောက်သွားခြင်းရဲ့ တရားခံက အစ်မပါဘဲ။ အရမ်းကြီးလည်း ချီးကျူးမနေပါနဲ့ဦး။ လုပ်ရတာ လွယ်လွယ်လေးပါ။
Facebook မှာ ပိုက်ဆံ ရှာချင်ရင် ဒီလို quiz လောက်နဲ့တော့ မရဘူးလေ။ game တွေကနေတော့ ပိုက်ဆံရှာတာ မြင်ဖူးတယ်။ Facebook ဂိမ်းတွေ ကစားတယ်မလား။ တစ်ချို့ ဂိမ်းတွေက အမြည်းဘဲ အလကား ပေးကစားပြီး premium ဆော့ချင်ရင် ဝယ်ရတယ်။ mafia, pet society, farm town တို့လိုမျိုးကြတော့ ဂိမ်းထဲမှာ ပိုက်ဆံထပ်ဖြည့်ချင်ရင် paypal တို့ visa card တို့ နဲ့ ဖြည့်ရတယ်လေ။ အဲဒီကနေ သူတို့ ပိုက်ဆံရကြတာပေါ့
29/4/09 10:00 PM
ကျွန်တော်တော့ ၁၀၀% ရတယ်။ ဘာရမလဲ ဖြေပလိုက်တယ်။
ကျွန်တော်တော့ mafia war ဂိမ်းကစားတယ်ဗျ။
30/4/09 3:14 PM
အဲဒီ quiz က Sandy တို့ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာအတော်ရေပန်းစားခဲ့သေးတယ်
Sandy က 100% ပြည့်လို့ proud toba myanmar လုပ်နေချိန်မှာ.. သူငယ်ချင်း တရုတ်က သူကတော့ တရုတ်မို့ % နဲတယ်လို့ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ လာပြောနေလို့
နင်ကမြန်မာပြည်မှာ မွေးတာပဲမဟုတ်လားလို့ ရန်တောင်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်... anyway.. thanks for your quiz... :)
2/5/09 12:36 AM
လက်စသတ်တော့ ဒီ Quiz က Thinzar လက်ချက်ကိုး။ :D ဒါနဲ့ Cyberslacking နဲ့ ရာထူးတက်နိုင်တယ် ဆိုတာ နောက်ပြီး ရေးထားတာပါ။ အတည်မယူပါနဲ့။ ဟီးဟီး။
MrDBA>> ၁၀၀% ဂုဏ်ယူပါတယ်ကွယ် :D သဉ္ဖာလည်း mafia wars ကစားသေးတယ်။ ဟိုနှိပ်ဒီနှိပ်နဲ့ level 10 ရောက်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာကြီးမှန်းလဲကို မသိလိုက်ဘူး။ ဆက်မကစားဖြစ်တော့ဘူး။
may>> သဉ္ဖာလည်း တရုတ်ပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာမွေးပြီး မြန်မာပြည်မှာကြီးတာဆိုတော့ proud tobmyanmar ဘဲပေါ့ :) quiz ဖြေပြီး comment ဝင်ရေးပေးသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ZT>> ခုမှသိတာလား :D သဉ္ဖာက ကိုZT ဘာရေးရေး senior တစ်ယောက်ဆီက လေ့လာ သင်ယူရတယ်ဆိုပြီး အတည်ယူတယ်။
2/5/09 11:42 AM
စီပုံးမတွေ့လို့ ဒီမှာ အော်သွားတယ်
19/5/09 10:03 AM
19/5/09 12:15 PM
သက်ပိုင်သူ>> အာခီတက်ကြီး လာလည်သွားတာ ဝမ်းသာပါတယ် :)
သုနှင်းဆီ>> လင့်ခ်ထားတာ ကျေးဇူး အများကြီးတင်၏။ သုနှင်းဆီ စီကနေ visitor တွေ အများကြီး ရောက်လာတယ်။ အသစ်က ရေးနေတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတလော ဝါကျတွေကို အမြီးအမောက် တည့်အောင် မရေးနိုင်ဘူးလို့ ခံစားနေရတယ်။ ဒါကြောင့် အပြီးမသတ်နိုင်သေးဘဲ မတင်ဖြစ်သေးတာ :D
19/5/09 12:42 PM
ငါးပိတော့မစားဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖြေတုန်းက ၁၀ဝ ရတယ်ထင်တယ်။ :)
Talkii>> အင်း..ဟုတ်တယ်။ အဲဒါကြောင့်လေ.. သူက အကုန်မှန်စရာ မလိုဘူး။ အများစု မှန်ရင် ရပြီ။ :)
4/8/09 4:21 PM